Kule mpelasonto: Impelasonto yokuqalisa yase-Indianapolis | Martech Zone
I-Startup Weekend umcimbi omkhulu wamahora angama-54 oxhuma onjiniyela bewebhu abanethalente futhi abakhuthazekile, abaphathi bebhizinisi, abaculi bezithombe, ama-gurus wokumaketha, nabathandi bokuqalisa ukuze bakhe izinkampani kusuka kumqondo wokuqalisa!
I-Indianapolis izosingatha umcimbi wayo we-Startup Weekend ngoDisemba 5th? 7th ePurdue School of Engineering and Technology enkampanini ye-IUPUI yedolobha.
Umcimbi uqala ngo-5 ntambama ngoLwesihlanu kuDisemba 5 ngomncintiswano wenkundla yokuphakamisa itiyela. Ababambiqhaza bese bevotela izinkampani abangathanda ukuzakha futhi bahlangane babe ngamaqembu ngokususelwa kuzintshisekelo nakumaqoqo amakhono. Amaqembu asebenza ezinkampanini zawo ngempelasonto ephetha ngokukhonjiswa kwalo mkhiqizo ngeSonto kusihlwa ngoDisemba 7. Abatshalizimali bamukelekile ukuhambela izethulo zokugcina.
Ngaphezu kwabahlanganyeli, iSonto Lokuqalisa lenzeke ngosizo lokupha kwabaxhasi emphakathini wendawo. Abaphathi bomcimbi njengamanje bafuna abaxhasi abazosiza ekuqedeni izindleko zokubamba lo mcimbi. Uma ungathanda ukuba ngumxhasi noma ungathanda ukuthola eminye imininingwane ngomcimbi sicela uvakashele iwebhusayithi ku- http://indianapolis.startupweekend.com/.
? I-Startup Weekend iyindawo enhle hhayi nje yokuxhumana nabanye abantu abangosomabhizinisi kuphela kodwa ukusebenzisa amakhono akho nezintshisekelo zakho ngokwesimo sebhizinisi langempela. Impelasonto ye-Indianapolis izokwenza i-Indiana izwe lokuqala ukubamba izimpelasonto ezintathu? kusho uLorraine Ball, uMongameli Wabavula Imvula noMsunguli Wokumaketha KweRoundpeg
I-Startup Weekend, LLC isuselwe ngaphandle kweBoulder, eColorado futhi isiza imicimbi yangempelasonto ukusuka edolobheni kuya edolobheni njengoba kuvotelwe kuwebhusayithi yayo, http://startupweekend.com/.
Imicimbi yangaphambilini yase-Indiana Startup Week ibibanjelwe eBloomington, IN nase West Lafayette, IN. Iningi lezinkampani ezakhiwe ngezimpelasonto ezedlule bezisuselwa kuwebhu futhi eziningi seziqhubeke zaba ngamabhizinisi asebenzayo.
Tags: Guy KawasakiizinqumoSocial Media Marketingukulandelela ababhali